I-Bridgid Harchick - I-NAB Show News ngu-Broadcast Beat, Umsakazi Osemthethweni We-NAB Show - I-NAB BONISA
Ikhaya » Izingobo Zomlobi: Bridgid Harchick
Izingobo Zomlobi: Bridgid Harchick
I-2019 #NABShow: #GALSNGEAR Yamanje i-NAB Schedule!
#GALSNGEAR, isinyathelo se-Women in Film & Video (WIFV), sizobamba imicimbi eminingi ngo-Ephreli 9th nge-10th njengengxenye ye-2019 NAB Show e-Las Vegas. I-#GALSNGEAR ibaluleke kakhulu embonini yethu ekusebenzeni ukuqinisekisa ukuthi abesifazane besimayelana nokukhiqiza abezindaba bathola ukufinyelela kwezobuchwepheshe bamuva kanye namathuba okuxhumana amanethiwekhi aphezulu. "Abesifazane bahola ...
Izimpawu ze-Arc Publishing ze-Washington Post neGraham Media Group
I-Publishing yase-Washington Post ye-Arc Publishing yamemezele ukuthi isayine nomsakazo we-Graham Media Group, insizakalo ye-Graham Holdings Company, enikeza iziteshi zayo ukufinyelela ohlelweni lwezokuphatha okuqukethwe kwevidiyo ye-Arc. Lena iklayenti yesibili ye-Arc yokusakazwa kwe-US ezinyangeni eziningi, ngemuva kokuqaliswa kukaRaycom Media kuleDisemba 2018 eyedlule. Ngaphandle kokwenza amandla onke amasayithi kaRaycom angaphansi kuka ...
I-FloSports ikhetha Izintambo ze-TVU Zokukhula Kwamavidiyo Wokuthwebula Nokukwabelana Kwendawo
Ngezidingo ezikhulayo zokubanjwa kwevidiyo bukhoma ku-on-location kanye nokwabelana futhi ngezikhathi ezibucayi ze-24 / 7 yokuhlelwa kwezemidlalo bukhoma futhi okufunayo, i-FloSports, i-innovator kwimidlalo edijithali yezemidlalo kanye nokuqukethwe kwangempela, ikhethe i-TVU Networks njenge-Video- Umhlinzeki we-technology we-IP ngaphezulu. I-FloSports ihlala imifudlana emincintiswaneni bukhoma ye-10,000 ngomnyaka kuwo wonke amapulatifomu wayo enezimfuneko zokuqukethwe kwevidiyo. FloSports '...
I-Broadfield Distributing, Inc. isimemezele ngokusemthethweni ukubambisana kokusatshalaliswa kwe-RED Cinema futhi izonikeza lonke uhlelo lwekhamera ye-DSMC2 oluhlanganisa: I-MONSTRO 8K VV, i-HELIUM 8K S35, ne-GEMINI 5K S35 e- #NABSHOWNY ekuqaleni kwalokhu ekuseni. UGary Bettan, uMongameli weBroadfield Distributing uthe "Sijabule ngaso sonke isikhathi ukwandisa imigqa yethu yomkhiqizo kodwa angizange ngijabulele lokhu ...
#NABSHOWNY Ungalokothi Ulahlekelwe I-ICG Panel Presentation: Yeka ukuthi iThelevishini engayibhalwanga ibuyisela kanjani i-Multi-Cam!
Ochwepheshe abaningi bezimboni bayavuma, ukuthi izindlela esizikhiqize zethelevishini enamakhamera amaningi bezishintsha ngokushesha, ngamasu asemaphethelweni we-TV bukhoma namuhla. Indawo enhle yokuqonda ukusebenza namasu avuselelwe ukuhambela i-NAB Show New York futhi ulalele ukwethulwa kwe-International Cinematographs Guild (ICG, IATSE Local 600) ye-How Unscriptted Television ...
#IBC2018 Ungaphuthelwa Umbukiso!
I-IBC Show 2018 igcwele imibukiso emangalisayo nezinketho zenkomfa ezizohlinzeka ngokuhlangenwe nakho okunamandla kubo bonke abakhona. Egcinwe minyaka yonke ngo-Septhemba ku-RAI i-Amsterdam, le minyaka #IBC2018 izoba nesimiso somhlangano kusukela ngo-September 13th-17th kanye nombukiso oqala ngo-Septhemba 14th-18th. Amathuba wokuxhumana azoba amahle kuwo wonke amabhodi ukuthi ngabe wakho ...
I-Osprey Video Inamanani Wokunyusa atholakalayo manje ngo-Septhemba 28th!
I-Osprey Video inezintengo ezithile ezimangalisayo manje ngoSepthemba 28th. Noma ngabe ungumsebenzisi wokugcina noma umhlanganisi wohlelo, ukungezwa kwakamuva kwama-rackmount nabaqaphi bezinkambu kuzothuthukisa noma yisiphi isiphetho sokuqeda isixazululo nganoma yikuphi ukugeleza komsebenzi okuhlukile. Bheka iminikelo engezansi! I-Osprey RM12G-1 12G-SDI iyi-4K qapha enesixazululo sendabuko se-3840 × 2160. Isebenza njenge ...
I-Dejero ne-Draganfly i-Ideal Match!
Yini indlela engcono yokulayisha i-drone yakho efwini lapho phezulu emafwini! UDejero, umhlinzeki oholayo wezixazululo ezilawulwa ngamafu ohlinzeka ngokuthuthwa kwamavidiyo nokuxhuma kwe-Intanethi uhlanganyele noDraganfly, i-SUAS eseCanada (Uhlelo Olincane Lwezindiza) ekwakheni ukubambisana kwezobuchwepheshe. I-quadcopter entsha ye-Draganfly's Commander UAV izohanjiswa nge-Dejero EnGo enamandla ...
UJeff Smith Ukhethwe NjengePhini Likamongameli, AmaMelika nguLawo
U-Lawo, inkampani ye-IP-Video, AoIP ne-Networked Audio-Video izinhlelo ezizinze eRastatt, eJalimane, umemezele ukuqokwa kukaJeff Smith njengePhini Likamongameli Wezokuthengisa, Amelika. USmith unolwazi olunzulu lokuthengisa ngobuchwepheshe kusuka emsebenzini wakhe ne-Evertz kusukela nge-2006. Ukuqokwa kukaSmith, kukhombisa ukuzinikela kukaLawo okuqhubekayo ezimakethe zethelevishini nasemsakazweni eNyakatho Melika. ...
Ukubukiswa Komkhiqizo: I-ATTO ThunderLink SH 3128 Manje Ukuthumela!
I-ATTO ThunderLink SH 3128 manje isithunyelwa futhi le-Thunderbolt 3 enamandla kwi-12Gg SAS / SATA adaptha izonikeza abasebenzisi ukuxhumana okusheshayo nokuthembekile kokugcina ngaphezulu kokudluliswa okuphansi kakhulu kwe-latency kanye nedatha ephezulu ye-bandwidth. Le yunithi inikezela nge-12Gb / s SAS / SATA uxhumano lwawo wonke amapulatifomu e-40Gb / s Thunderbolt 3 (2-port). Kuhlolwa ezindaweni ezifunwa kakhulu njengabezindaba kanye nokuzijabulisa kwe ...
2018 #NABShow: Ukuhlola ikusasa loMsakazo
Lesi sikhathi samandla afakiwe "Ikusasa Lokulandela Umsakazo," azoba nabaphathi abaphezulu beBeasley Media Group, Cox Media Group, Entercom noJacobs Media bexoxa ngemizamo yamanje yezimboni nokwabelana ngemibono yabo ngekusasa lomsakazo. Amaphuzu amakhulu okuxoxwa ngawo kuzoba ukuthi umsakazo uhlangana kanjani nomkhakha wezimoto, ukuxhumana kwezentengiselwano nabathengisi, kanye nezinhlelo ezintsha. Iseshini izothatha ...
I-2018 #NABBonisa: Izimpendulo Zemizwa Ebonakalayo Ukuxoxa "I-Star Wars: I-Jedi Yokugcina"
E-Main Stage eNorth Hall eLas Vegas Convention Center ngoLwesithathu, Ephreli 11 e-2: I-00 pm Amalungu aphambili eqembu eliphakeme le-VFX kaLucasfilm kanye nesitudiyo sopopayi, i-Industrial Light noMlingo bazoba neseshini yamandla ekudalweni kwe-blockbuster ye- "'Star Wars: Jedi Yokugcina': Joyina Ukuhlubuka." Le ngxoxo ye-dive ejulile yokudala ...
I-2018 #NABBonisa: Umkhiqizo wokukhanya: I-ROTOLIGHT NEO 2 LED
Umnqobi we-Photography News Innovation Award 2018, umkhiqizi wokukhanyisa i-British LED, i-Rotolight, uzoletha imikhiqizo yomhlaba wonke ku-2018 #NABShow Booth C2949 (RTS Inc). I-Rotolight iqalise ukuqala kokukhanyisa kwe-LED emisha eyenzelwe ochwepheshe ekuhambeni! Noma ngabe ungumthwebuli wezithombe noma i-videographer, i-NEO 2 LED izoba ukukhanyisa kwakho ...
I-Dylan Tichenor ACE Umethuli ovelele ku-17th Las Vegas SuperMeet #SuperMeet!
U-Oscar oqokwe umhleli wefilimu, uDylan Tichenor ACE uzoba umethuli ovelele ku-17th Anniversary of SuperMeets, ezoba ngoLwesibili, ngo-Ephreli 10th, 4: 30pm - 11: 00pm eRIO Hotel- Brasilia Ballroom eLas Vegas, eNV. U-Dylan Tichenor waqala umsebenzi wakhe ngaphansi kukaGeraldine Peroni njengomhleli osizayo kumabhayisikobho nguRobert Altman's The Player futhi uthuthele ...
I-Podcasting Pavilion entsha ku- 2018 #NABShow
Umhlangano we-2018 #NABShow uzobe wethula iPodcasting Pavilion entsha nenqwaba yabakhangisi abasha abakhombisa ngokusobala lo mkhakha wezimboni owandayo. I-podcaster izoba nezinketho eziningi ukuthi izothuthukisa amandla akho akhona manje ngokusebenzisa amasu alalelwayo nemishini yokuthengisa noma ukumaketha i-podcast yakho ungakuthola lapha. Amasu wokuqukethwe we ...